Other News Archives - Shwe Soccer
ဂရန်နာဒါနဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ပွဲမှာ ပွဲချိန်တွင်း ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ ကွင်းအတွင်းပြေးဝင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဟာ ပွဲမတိုင်ခင် ၁၄ နာရီအလိုကတည်းက ပုန်းအောင်းစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့က အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီလူဟာ ပွဲစပြီး ၁၀ မိနစ်အကြာမှာပဲ ကိုယ်လုံးတိးနဲ့ ကွင်းအတွင်းကို ပြေးဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေက လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ရပြီး ကွင်းပြင်ခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ အိုလ်မိုဂါစီယာလို့ အတည်ပြုနိုင်တဲ့ အမျိုးသားဟာ လက်ရှိမှာတော့ The naked Man of Granada လို့ လူသိများထင်ရှားနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကိုဗစ်စည်းကမ်းတွေကိုလည်း ချိုးဖောက်ခဲ့ကာ ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုလည်း ရှောင်ကွင်းခဲ့ပြီး ငွင်းအတွင်းကို အခုလိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် ၁၄ နာရီအထိ စိတ်ရှည်ရှည်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကာ ကွင်းအတွင်းက ပြန်ထွက်ခဲ့ရချိန်မှာလည်း မတုန်မလှုပ်နဲ့သာ ရှိနေခဲ့တာကိုလည်း မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ “ကြီးမားတဲ့ ပတ္တူကြီးတစ်ခုကို သူဖန်တီးခဲ့ပြီး အဲဒီအောက်မှာပုန်းနေခဲ့တာကို သိရှိခဲ့ရပါတယ်၊ သူက အားကစားကွင်းနဲ့ အခြားအဆောက်အဦတစ်ခုကြားက လုံခြုံရေးတွေကို ရှောင်ကွင်းပြီး သူဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာ မလုပ်ရမချင်းမှာ ၁၄ နာရီအထိ ပုန်းအောင်းနေထိုင်ခဲ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ” လို့ ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအမျိုးသားဟာ အခြားသောရည်ရွယ်ချက်တွေမရှိဘူးလို့ ယူဆရပြီး ကွင်းအတွင်း ဗလာထီးတည်းပြေးဝင်ဖို့သာရည်ရွယ်ခဲ့ပုံရတယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းရပါတယ်။ အဆိုပါပွဲမှာတော့ ယူနိုက်တက်က အိမ်ရှင်ဂရန်နာဒါကို ၀-၂ နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မားကပ်စ်ရက်ရှ်ဖို့ဒ်နဲ့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်တို့က အနိုင်ဂိုးတွေ သွင်းယူခဲ့ကြပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက်နိုင်ဖို့ သေချာသလောက်ရှိ​ေနပြီဖြသ်ပါတယ်။ ဒုတိယအကျော့ကိုတော့ အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ ကစားရမှာဖြစ်ကာ ဂရန်နာဒါအနေနဲ့ ၃ ဂိုးပြတ်နဲ့ ပြန်လည်အနိုင်ယူနိုင်မှသာ နောက်တဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်တော့မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယူရိုပါလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ ဆလာဗီးယားပရပ်ဂ်ကို တစ်ဂိုးစီသရေသာ ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် အာဆင်နယ်ကစားသမားဟောင်း မာတင်ကီအွန်က အာဆင်နယ်ကစားသမားတွေရဲ့ မျက်နှာကို တယောက်ယောက်ကထိုးကြိတ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီလို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်ဟာ ၈၆ မိနစ်မှာ ဦးဆောင်ဂိုးရခဲ့ပေမယ့် နာကျင်အချိန်ပိုမှာ ချေပဂိုးပြန်ပေးခဲ့ရလို့ ဒုတိယအကျော့ကို ရုန်းကန်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆလားဗီးယားကတော့အဝေးဂိုးရရှိခဲ့လို့ အခွင့်သာခဲ့ပြီး အာဆင်နယ်ကို ကျော့်ဖတ်နိုင်မလား စောင့်ကြည့်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲချိန်အစောပိုင်းတွေမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အာဆင်နယ်တို့ ဖြုန်းတီးခဲ့ပြီး ဆာကာကလည်း ခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့လို့ အာဆင်နယ်တိုက်စစ်အခက်တွေ့နေခဲ့ရပါတယ်။ ဝီလီယံကလည်း ဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ဘဲ ရရှိခဲ့တဲ့ အနိုင်ဂိုးကို ခဏလေးအတွင်းမှာ ပြန်လည်ခွင့်ပြုခဲ့ရတဲ့အပေါ် မာတင်ကီအွန်က ဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်။ နည်းပြအာတီတာကိုယ်တိုင်လည်း ဒီရလဒ်ကို စိတ်ပျက်နေခဲ့ပြီး ပွဲအပြီးမှာတော့ ခံစားရတဲ့အရသာက ဆိုးရွားတယ်လို့ညည်းတွားသွားခဲ့ပါတယ်။ ကီအွန်က ” အာဆင်နယ်က ကောင်းကောင်းစကစားနိုင်ဖို့ဆို နိုးထဖို့လိုအပ်နေပါပြီ၊ ဒီနေ့ည သူတို့ကစားသွားတာက ကျနော့်အတွက် အဲလိုပဲခံစားရပါတယ်၊ နည်းစနစ်ပိုင်းလည်း မှားယွင်းခဲ့ပါတယ်၊ ကစားသမားတွေကို မင်းတို့ကစားနိုင်ရဲ့လားလို့ မေးရမယ့် အခွင့်အခါကောင်းပါ၊ ဒါပေမယ့် သူတို့က အသင်းကို ခံစစ်ပနေ စကစားဖို့ကို ခွင့်ပြုခဲ့ကြပါတယ်၊ ဒီရာသီပထမပိုင်းက စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး သူတို့က ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကဝက်စ်ဟမ်းနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အသင်းမျိုးမဟုတ်ပြန်ဘူး” “အာဆင်နယ်က တက်ကြွတဲ့ပုံမျိုးမှာ မရှိသလိုပါပဲ၊ ပွဲမတိုင်ခင်မှာ သူတို့နိုးကြားနေစေဖို့ တယောက်ယေက်က သူတို့မျက်နှာကိုဖြတ်ရိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် ထိုးကြိတ်တာမျိုးလုပ်ဖို့ သူတို့လိုအပ်နေပါတယ်၊ ဒုတိယပိုင်းမှာ အာတီတာက အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ခဲ့ပေမယ့် မကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါဘူး” လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကီအွန်က အာဆင်နယ်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ ချေပဂိုးပေးရချိန်မှာ လုံလောက်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေလည်း မရှိခဲ့ဘူးလို့ ဒေါသတကြီးနဲ့ ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
ယူရိုပါလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲတွေကို မနေ့ကကစားခဲ့ရာမှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ ဂရန်နာဒါကိုအဝေးကွင်းမှာ ၂-၀ နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြီး ဆီမီးအတွက် အခြေအနေကောင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒုကျော့ကို အိမ်ကွင်းမှာကစားရမှာဖြစ်လို့လည်း ပိုမိုအခွင့်အရေးကောင်းခဲ့ပြီး ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ အသင်းကို ဆီမီးဖိုင်နယ်ဆီ ၂ရာသီဆက်တိုက် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ သေချာသလောက်ရှိနေခဲ့ကာ ဆီမီးဆိုးလ်ရှားဆိုတဲ့ နာမည်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်း ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်ဟာ လူစုံထုတ်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ဂရန်နာဒါကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အသင်းလိုက်ကစားပုံမာကျောတဲ့ ဂရန်နာဒါက ခံစစ်ကို ဦးစားပေးကစားခဲ့လို့ ယူနိုက်တက်တို့အခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုးဖောက်ရမလွယ်ကူတာကြောင့် ဂိုးရဖို့အချိန်ယူခဲ့ရပြီး ရက်ရှ်ဖို့ဒ်က ၃၁မိနစ်မှာမှ အဖွင့်ဂိုးသွင်းယူန်ုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂရန်နာဒါတို့ ချေပဂိုးချက်ချင်းပြန်ရဖ်ု့ နီးစပ်ခဲ့ပေမယ့် အသုံးမချနိုင်ခဲ့လို့နစ်နာခဲ့ရပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာ ကာဗာနီဝင်လာပြီးနောက် ယူနိုက်တက်တို့ နောက်ဂိုးတွေရဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။ ဂရန်နာဒါကရှေ့အဆင့်တွေမှာ မထင်မှတ်တာတွေ လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ယူနိုက်တက်ကို ကြီးကြီးမားမားဖိအားမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။မိနစ်ကိုးဆယ်ပြည့်လို့ နာကျင်အချိန်ပိုတစ်မိနစ်မှာတော့ ဖာနန်ဒက်စ်က သူ့ကြောင့်ရတဲ့ ပယ်နယ်တီကနေကိုယ်တိုင်ကန်သွင်းယူပြီး ယူနိုက်တက်ကို နောက်တဆင့်အတွက် စိတ်ချရစေခဲ့ကာ ၂-၀ နဲ့ အနိုင်ရစေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ ဖလားပြိုင်ပွဲတွေကို ဆီမီူဖိုင်နယ်အဆင့်ထိ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ ဒီရာသီမှာလက်ကျန်ဖလားအဖြစ် ယူရိုပါလိဂ်ကို မျော်လင့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေပြီး လပ်ကျန်အသင်းတွေမှာလည်း ထိတ်လန့်ရမယ့်ပြိုင်ဘက်နည်းပါးနေတာက အခွင့်ကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ အခြားပွဲတွေမှာတော့ အာဆင်နယ်နဲ့ဆလာဗီးယားတို့ တစ်ဂိုးစီသရေ၊ ရိုးမားက အေဂျက်ဇ်ကို အဝေးကွင်းမှာ ၁-၂ နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြီး ဗီလာရီးရဲလ်က ဒိုင်နမိုကို အဝေးကွင်းမှာ ၀-၁ နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။
၁ စက္ကန့်ကျော်အတွင်းခြေ ၁၁ လှမ်းလှမ်းပြီး ဂိုးသွင်းပြခဲ့တဲ့ ဘတ်ပီ
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကို ပီအက်စ်ဂျီက အနိုင်ရရှိခဲ့ရာမှာ တိုက်စစ်မှူး ကိုင်လီယန်ဘတ်ပီရဲ့ ဒုတိယသွင်းဂိုးကတော့ ပြောစမှတ်တွင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ်ပီက တစ်ဦးတည်း နှစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပထမဂိုးကိုတော့ ပွဲအစ ၃ မိနစ်မှာပဲ ဘတ်ပီက ဧရိယာအတွင်းကနေ အပိုင်ကန်သွင်းယူခဲ့ပြီး ဘိုင်ယန်ဂိုးသမားနူအာကာကွယ်နိုင်လုနီးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဘောလုံးက ထိထွက်ခဲ့ကာ ဂိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘတ်ပီက သူ့ရဲ့ဒုတိယသွင်းဂိုးကို ပွဲချိန် ၆၈ မိနသ်မှာ သွင်းယူခဲ့ရာမှာတော့ လျင်မြန်တဲ့ တန်ပြန်တိုက်စစ်ကစားပုံကနေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တဖက်နှစ်ဂိုးစီသရေဖြစ်နေချိန်မှာ ပီအက်စ်ဂျီက ဘောလုံးရရှိခဲ့ပြီး ဘတ်ပီဟာ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေနဲ့ အပြိုင်ပြေးလွှားခဲ့ပြီးနောက် နောက်ခံလူတဦး ကပ်ထားတဲ့ကြားကနေ ညာခြေနဲ့ ခြေခေါက်ချိုးကန်သွင်းခဲ့ရာမှာ နူအာ ဘာမှမတတ်နိုင်ဘဲ ဂိုးပေးခဲ့ရပါတယ်။ Mbappe doing Ronaldo things. I present to you the heir!!!#BAYPSG pic.twitter.com/a3qFGFfEUo — MK. (@ome1za) April 7, 2021 ဒီဂိုးကို သွင်းယူချိန်မှာ ဘတ်ပီဟာ ၁.၈၂ စက္ကန့်အတွင်း ခြေလှမ်းပေါင်း ၁၁ လှမ်းအထိ လှမ်းခဲ့တယ်လို့ မှတ်တမ်းတွေက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့်ရဲ့ ခြေအနှုတ်အသိမ်း မြန်ဆန်မှုကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး အံ့မခန်းစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်တယ်လို့ စကိုင်းအီတလီက ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ ဖော်ပြခဲ့ကာ မယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်တယ်လို့လည်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဘိုင်ယန်နောက်ခံလူတွေဖြစ်တဲ့ ဆူးလ် နဲ့ ဘိုတန်တို့ဟာလည်း ဘတ်ပီ၊ နေမာတို့ကို ခက်ခက်ခဲခဲထိန်းသိမ်းခဲ့ရပြီးဘယ်လိုမှမစွမ်းသာပဲ ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကစားသမားတွေရဲ့ လျင်မြန်မှုဟာ သူတို့အတွက် အခက်အခဲတွေဖြစ်ခဲ့ရပြီးလိုက်မမီအောင်ဖြစ်ခဲ့ရကာ သူတို့ဘောလုံးရလာတိုင်းမှာ ဘိုတန်တို့လူစု ကပျာကယာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ကွင်းမှာ ၃ ဂိုးအထိပေးကာ အရေးနိမ့်ခဲ့ရလို့လည်း နောက်တကျော့အတွက် အရေးမသာဖြစ်ခဲ့ရပြီး လက်ရှိချန်ပီယံအတွက်တော့ ကွတားကနေ လှည့်ပြန်ရဖို့ နီးစပ်ခဲ့ပါပြီ။
ဟာလန်းရဲ့လက်မှတ်ကို တောင်းခဲ့တဲ့ ဒိုင်လူကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်
မန်စီးတီးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ စည်းကြပ်ဒိုင်လူကြီးကို လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့တဲ့ ဟာလန်းရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ အားလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ ဥမင်အတွင်း ဝင်ရောက်ခဲ့ချိန်မှာ ဒိုင်လူကြီး အောတာဗီယန်ဆိုဗရီက နော်ဝေကြယ်ပွင့်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဟာလန်းကလည်း တုံ့ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ ဟာလန်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ စာရွက်ကို အော်တစ်ဇင်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ ကလေးငယ်တွေကိုလှူဒါန်းနိုင်ဖို့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆီ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒိုင်လူကြီးရဲ့ တောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေလည်း ရှိခဲ့ကာ အခြားသောကစားသမားတွေရဲ့ရှေ့မှာ အခုလိုတောင်းဆိုခဲ့မှုက မှားယွင်းကြောင်းနဲ့ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာကို ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်သံားသပ်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အိုဝင်ဟားဂရေ့ဗ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Sky Sports ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ရိုမေးနီးယားဒိုင်လူကြီးဟာ သူရရှိခဲ့တဲ့လက်မှတ်ကို အော်တစ်ဇင်ကလေးငယ်တွေအတွက် ရန်ပုံငွေရရှိအောင် လူမှုအသင်းအဖွဲ့ဆီ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ရိုမေးနီးယားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆိုဗရီအနေနဲ့ ဝေဖန်ခံရမှုတွေကြောင့် အခုလိုလုပ်ခဲ့တာလား၊ မူလကတကည်းက အစီအစဉ်ရှိလို့ ပြုလုပ်ခဲ့တာလားဆိုတာ မသိရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပွဲချိန်မပြီးခင်မှာ အခုလိုလုပ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့တာကတော့သူ့ဘက်ကမှားယွင်းတယ်လို့ နာမည်ကျော်ကစားသမားဟောင်းတချို့က သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရိုမေးနီးယားသတင်းစာတစ်စောင်ကလည်း ဆိုဗရီဟာ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေရဲ့ လက်မှတ်တွေကို လိုက်လံစုဆောင်းလေ့ရှိသူလို့ ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုစုဆောင်းပြီးရင် လူမှုရေးရန်ပုံငွေတွေရရှိဖို့ စင်တာတွေကို ပေးအပ်လေ့ရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဖော်ပြခဲ့တာကြောင့်လည်း ဆိုဗရီဟာ အများအတွက် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားခဲ့ပြီး သူ့လုပ်ရပ်အတွက် ချီးကျူးမှုတွေ ပြန်ရခဲ့ကာ ဝေဖန်သံတဖက်၊ ချိူကျူးမှုတဖက် ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဘယ်ပြင်သစ်သားမှ မရယူနိုင်ခဲ့တဲ့စံချိန်ကိုရရှိဖို့နီးစပ်နေတဲ့ ဘတ်ပီ
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ပွဲမှာ ပီအက်စ်ဂျီအတွက် အနိုင်ဂိုးနှစ်ဂိုးအထ ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ဘတ်ပီရဲ့ ဒီရာသီချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုးဟာ ၈ ဂိုးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၀ အရွယ်တိုက်စစ်မှူးဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဂိုးသမားနူအာစောင့်ကြပ်နေတဲ့ ဂိုးပေါက်ထဲကို အနိမ့်ဘေအပြင်းကန်သွင်းချက် ၂ ချက်နဲ့ ၂ ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး ပီအက်စ်ဂျီကို ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့် ရောက်ရှိစေဖို့ အခြေအနေကောင်းကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သလို စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သွင်းဂိုး ၈ ဂိုးအထိ ရှိခဲ့တာကြောင့် ဘတ်ပီဟာ ချန်ပီယံလိဂ်တစ်ရာသီအတွင်း ပြင်သစ်သားတစ်ဦးအနေနဲ့ သွင်းဂိုးအများဆုံးရရှိတဲ့မှတ်တမ်းမှာ ဘက်ယက်ဒါနဲ့ ဒေးဗစ်ထရာဇီဂက်တို့ရဲ့ မှတ်တမ်းကို လိုက်မီခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇-၁၈မှာ ဘက်ယက်ဒါ၊ ၂၀၀၁-၀၂ မှာ ထရာဇီဂက်တို့က ချန်ပီယံလိဂ် ၈ ဂိုးစီ သွင်းယူခဲ့ကြပြီး ဘတ်ပီအနေနဲ့ နောက်ထပ်တစ်ဂိုးရခဲ့မယ်ဆိုရင် ချန်ပီယံလိဂ်တစ်ရာသီအတွင်း သွင်းဂိုးအများဆုံးရတဲ့ ပြင်သစ်သားအဖြစ် စံချိန်တင်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအကျော့ကို ပဲရစ်မှာ ကစားရမှာဖြစ်ပြီး ပီအက်စ်ဂျီသာ နောက်တဆင့်တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘတ်ပီအတွက် ဂိုးရဖို့အခွင့်အလမ်းက ပိုမိုများပြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပီအက်စ်ဂျီကစားသမားဘဝ လက်ရှိချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုးစုစုပေါင်းဟာ ၂၁ ဂိုးအထိ ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး တိညက်စစ်မှူးဟောင်း ဇလာတန်ထက် ပိုမိုများပြားခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရကာ ဂုဏ်ယူဖွယ်မှတ်တမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ ၃၈ ပွဲမှာ ၃၂ ဂိုးအထိရရှိထားသလို လီဂူးရွှေဖိနပ်ဆုကိူလည်း သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ရရှိဖို့ရေပန်းစားနေပါတယ်။ ဆယ်က​ျော်သက်ကစားသမားဘဝထက် ပိုမိုရင့်ကျက်လာပြီး တည်ငြမိမှုပိုင်းရော၊ ခြေစွမ်းပိုင်းပါ ကောင်းမွန်လာပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သတ်မှတ်ခံလာရတာကြောင့် အနာဂတ်မှာ ဘောလုံးလောကကို ကြီးစိုးမယ့် ကစားသမားအဖြစ်နဲ့ပါ ကျွမ်းကျင်သူတွေက သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
ဝက်ဘရွန်းကို ငါးဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်မှုကနေ ချက်ချင်းရုန်းထွက်ပြခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီး
ဝက်ဘရွန်းကို ငါးဂိုးပြတ်နဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ အရှက်ရဖွယ်အရေးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီးဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်ပထမအကျော့မှာတော့ ပေါ်တိုကို ၀-၂ နဲ့ အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။ တူချယ်လ်ရဲ့ အသင်းဟာ လိဂ်ပွဲအရှုံးကို ချေဖျက်ပြနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပြီး အဝေးကွင်းမှာ ပေးဂိုးမရှိ၊ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲရရှိခဲ့လို့ ဆီမီးဖိုင်နယ်က သေချာသလောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ကာ ချန်ပီယံလိဂ်အိပ်မက်တွေ နော​က်တကြိမ်မက်ခွင့် ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပီအက်စ်ဂျီကို ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲဆီ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ တူချယ်လ်ဟာ ချယ်လ်ဆီးနည်းပြဘဝမှာ ရလဒ်ကောင်းတွေ ဆက်တိုက်ရရှိနေပြီး အခြေအနေကောင်းမွန်နေပါတယ်။ ဝက်ဘရွန်းကို ဂိုးပြတ်နဲ့ မထင်မှတ်ဘဲအရေးနိမ့်တာကလွဲရင် ရှူံးပွဲမရှိထဲ့ဘဲ ခံစစ်ကလည်း တော်တော်လေးကောင်းမွန်နေခဲ့ပါတယ်။ နည်းပြအပြောင်းအလဲနဲ့ဆိုရင် ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ကံကောင်းတတ်တဲ့ ချယ်လ်ဆီးရဲ့ ဇာတာကတော့ စောင့်ကြည့်ချင်စရာပါ။ ချယ်လ်ဆီးအတွက် မေဆန်မောင့်နဲ့ ချီဝဲလ် ဂျော်င်တို့က ဂိုးသွင်းပေးခဲ့ကြပြီး ဝေဖန်ခံနေရတဲ​့ ဂျော်ဂျင်ဟို ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခံစစ်မှူးပီပီဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ပေါ်တိုဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ချယ်လ်ဆီးခံစစ်ကြောင်းကို ထိုးဖောက်ဖို့ ခက်ခဲခဲ့ပြီး ပြိုင်ဘက်တိုက်စစ်ကို အချိန်ပြည့်ခုခံဖို့လည်း မစွမ်းသာတာကြောင့် သွင်းဂိုးနှစ်ဂိုးပေးခဲ့ရကာ နောက်တကျော့အတွက် အားယုတ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပပြိုင်ပွဲမှာ ပိုခြေစွမ်းပြနေပေမယ့် ပေါ်တိုဟာ ထိပ်တန်းလိဂ်ငါးခုကအသင်းတွေထက် ခေါင်းတလုံးနိမ့်နေဆဲဆိုတာကို ပကတိအတိုင်း မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ကတဆင်​့ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ ရုန်းကန်နေရပေမယ့် ချယ်လ်ဆီးဟာ ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်အောင်ပွဲခံနေပါတယ်။ အက်သလက်တီကိုလိုအသင်းကို နှစ်ကျော့စလုံးအသာရခဲ့သလို ပေါ်တိုလို ခပ်မာမာအသင်းကိုလည်း ပထမအကျော့နဲ့တင် အပြတ်ဖြတ်နိုင်လုနီးပါး စွမ်းဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ တူချယ်လ်အနေနဲ့ ၂ရာသီဆက်တိုက် ဗိုလ်လုပွဲကို မတူညီတဲ့အသင်းနှစ်သင်းနဲ့ တက်လှမ်ူနိုင်တဲ့ နည်းပြဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့။
ဗိုလ်လုပွဲရှံးကြွေးကို အတိုးရော၊အရင်းပါပေါင်းပြီး ဘိုင်ယန်ကို ဆပ်ခဲ့တဲ့ PSG
ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ် ပထမအကျော့ရဲ့ ဒုတိယနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဗိုလ်လုပွဲကစားခဲ့ကြတဲ့ဘိုင်ယန်နဲ​့ပီအက်စ်ဂျီတို့ အကြိတ်အနယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမန်မြေပေါ်မှာ ပီအက်စ်ဂျီတို့ ခြေစွာခဲ့ပြီး ဘတ်ပီရဲ့သွင်းဂိုးတွေနဲ့ အနိုင်ယူခဲ့ကာ ဗိုလ်လုပွဲရှံးကြွေးကို ဆပ်နိုင်ခဲ့သလို ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်ရောက်နိုင်ဖို့ပါ အခြေအနေကောင်းသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လီဝန်ဒေါစကီးမပါလာတဲ့ ဘိုင်ယန်တို့ အိမ်ကွင်းမှာ ရုန်းကန်ခဲ့ရကာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပြီး လက်ရှိချန်ပီယံဘွဲ့ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ရာ ခက်ခဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ်ပီက ပွဲအစ ၃ မိနစ်မှာပဲ အဖွင့်ဂိုးကို သွင်းယူခဲ့ကာ ဂျာမနီသားတွေကို ထိတ်လန့်စေခဲ့ပါတယ်။ ၂၈ မိနစ်မှာ မာကွင်ဟို့စ်က နောက်တစ်ဂိုးထပ်သွင်းခဲ့လို့ ပြင်သစ်ကလပ်အရေးသာခဲ့ပြီး အရေးကြီးတဲ့အဝေးဂိုးတွေပါ ရယနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဂိုးနှစ်ဂိုးကို ဘိုင်ယန်က ပြန်ချေပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီတိုက်စစ်မှူးဟောင်း ချုပိုမိုတင်းက ပထမချေပဂိုးကို ရယူပေးခဲ့ပြီး ဒုတိယပိုင်းမှာ မူလာက နောက်ထပ်ချေပခဲ့လို့ တစ်ဖက်နှစ်ဂိုးစီနဲ့ သရေဖြစ်သွားပြီး ပွဲကပိုမိုအကြိတ်အနယ်ရှိသွားခဲ့ကာ အိမ်ရှင်အတွက်လည်း မျှော်လင့်ချက်တွေရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ၆၈ မိနစ်မှာတော့ ဘတ်ပီက သူ့အတွက် ဒုတိယမြောက်နဲ့ အသင်းအတွက် တတိယဂိုးကို သွင်းယူခဲ့ကာ အနိုင်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ ၂-၃ နဲ​့ ပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပြီး ပြင်သစ်ကလပ်က အသာစီးရရှိသွားကာ ဘိုင်ယန်ကို အတိုးရော၊ အရင်းပါပေါင်းဆပ်ပြီး နေရစ်ခဲ့တော့လို့သာ ပြောဖို့ကျန်ပါတော့တယ်။ ဘိုင်ယန်အနေနဲ့ ပြင်သစ်မြေမှာ ကစားရမယ့် ဒုကျော့ပွဲမှာ အနည်းဆုံး ၂ ဂိုးပြတ်အနိာင်ရဖို့ လိုအပ်သွားပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီကတော့ ၁-၀ ၊ ၂-၁ အစရှိတဲ​့ ရလဒ်တွေနဲ့ အရေးနိမ့်ခဲ့ရင်တောင် နောက်တဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ လိုင်လီကိုအရေးနိမ့်ခဲ့လို့ ဖိအားတွေရှိခဲ့တဲ့ ပိုချက်တီနိုအတွက်လည်း ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ နိုင်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စပါးနဲ့အတူ ၂၀၁၉ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်ထားဖူးတဲ့ သူ့အတွက်တော့ ပီအက်စ်ဂျီနဲ့အတူ ဆုဖလားရယူဖို့က အရေးကြီးနေပါတယ်။ နာမည်ကျော်နည်းပြအဆက်ဆက် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့မှုတွေကို ပိုချက်တီနိုက စွမ်းဆောင်ပြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အသင်းသမိုင်းမှာ စံချိန်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဦးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်ရ။
ရီးရဲလ်ကို ရှုံးတဲ့ပွဲမှာ ကွင်းလယ်ဒိုင်ဘက်လိုက်တယ်လို့ ကလော့ပ်စွပ်စွဲ
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို အရေးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖ်ုင်နယ်ပထမအကျော့မှာ ကွင်းလယ်ဒိုင်ဖိလစ် ဘက်လိုက်ခဲ့တယ်လို့ လီဗာပူးလ်နည်းပြကလော့ပ်က စွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အဆန်စီယို ဂိုးမသွင်းခင် စက္ကန့် ၂၀ အလိုမှာ မာနေးကို ဖျက်ထုတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြစ်ဒဏ်ဘောမပေးဘဲ ဆီနီဂေါတိုက်စစ်မှူးကိုသာ အဝါကတ်ပြသခဲ့တဲ့အပေါ် ကလော့ပ်က ဒေါသထွက်နေခဲ့ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ ပယ်နယ်တီဧရိယာအနီးနားမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ လီဗာပူးလ်သာ ပြစ်ဒဏ်ဘောရရှိခဲ့မယ်ဆိုပါက အဆန်စီယိုရဲ့ ဂိုးကို ခွင့်ပြုရဖွယ်မရှိလို့ ရလဒ်ပိုင်းပြောင်းလဲခဲ့ဖွယ်လည်း ရှိပါတယ်။ လူးကပ်ဗက်ကွက်ဇ်တစ်ဦးတည်းသာ ရီးရဲလ်ကစားသမားအဖြစ် ကျန်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး ကွင်းလယ်ဒိုင်ကတော့ ပွဲကိုဆက်လက်ကစားဖို့သာ လက်ဟန်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ရီးရဲလ်က ပြန်လည်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပြီး အဆန်စီယိုက အယ်လစ်ဆန်ကိုပါ လှလှပပကျော်ဖြတ်ပြီး ဂိုးသွင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်။ “ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ ကွင်းလယ်ဒိုင်က ဒီညဘာတွေလုပ်ခဲ့လည်း ကျနော်မသိတော့ဘူး၊ သူက တကိုယ်ရည်တကာယဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကို ချခဲ့တယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်၊ ပွဲအပြီးမှာ မာနေးအပေါ်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က မမျှတဘူးလို့ ကျနော်ပြောခဲ့ပါတယ်၊ ကွင်းလယ်ဒိုင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အိုကေနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊” လို့ကလော့ပ်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း မာနေးဟာ ရီးရဲလ်ဂိုးဧရိယာထောင့်မှာ ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခံရပေမယ့် ကွက်းလယ်ဒိုင်က လျသ်လျူရှူခဲ့လို့ ကလော့ပ်နဲ့ သူ့ရဲ့အသင်း ဒေါသထွက်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ “ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်ချင်ရင်တော့ ကျနော်တို့ မှန်ကန်တဲ့ကစားပုံမျိုးလုပ်ပြရမှာပါ၊ ကျနော်တို့ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး၊အထူးသဖြင့် ပထမပိညင်းမှာပေါ့၊ ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး တခုတည်းသော အကောင်းမြင်မှုကတော့ ဂိုးရခဲ့တဲ့အချက်ပါပဲ၊ ပထမအကျော့အတွက်က ဒါလေးတခုပါပဲ၊ ဒီနေ့ညမှာ မက်ဒရစ်ကို ပြသနာတွေအများကြီးရှိနေအောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး၊ ဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက်တကျော့မှာ ဒါကိုပြသနိုင်ဖို့ လိုနေပါပြီ၊ ဒီနေ့ကတော့ မက်ဒရစ်အတွက် ကစားရတာက အရမ်းလွယ်ကူနေခဲ့ပါတယ်” လို့ ကလော့ပ်က ထပ်မံပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
မန်စီးတီးကို အရေးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ပဃဲမှာ သေချာပေါက်ဂိုးရတော့မယ့်အနေအထားကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကွင်းလယ်ဒိုင်က ပြသ်ဒဉ်ဘောသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာကြောင့် ဒေါ့မွန်လူငယ်ကစားသမား ဘီလင်ဟမ်က ဒေါသထွက်နေပါတယ်။ မန်စီးတီးဂိုးသမား အီဒါဆန်နဲ့ ဘောလုံးယှဉ်လုပြီးနောက် ဘီလင်ဟမ်က ဘောလုံးကို ရယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ​၏ိုးသာရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် မန်စီးတီးအတွက်တော်တော်လေးအခက်တွေ့ခဲ့မှာဖြစ်ပြီး အိမ်ကွင်းမှာတောင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့နိုင်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အနှေးပြကွက်တွေအရ အီဒါဆန်ဟာ ဘောလုံးထိန်းသိမ်းရာမှာ မှန်းဆချက်လွဲချော်ခဲ့ပြီး ဘောလုံးက လေထဲနှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဘီလင်ဟမ်က ဝင်ရောက်လုယူခဲ့ရာမှာ ဘောလုံးကိုသာ အာရုံစိုက်လုယူခဲ့ပြီး အရယူနိုင်ခဲ့သလို အီဒါဆန်ကိုလည်း ထိခိုက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ အီဒါဆန်စာ ကမူးရှူးထိုးနဲ့ ဘောလုံးရအောင် လိုက်ယူရာကနေ သူ့ရဲ့ခြေထောက်ဟာ ဘီလင်ဟမ်ကို ကန်မိခဲ့ပြီး သူသာလဲကျခဲ့ရပြီး ကွင်းလယ်ဒိုင်ကမှားယွင်းဆုံးဖြတ်ကာ ပြစ်ဒဏ်သတ်မှတ်ခဲ့လို့ ဂိုးသွင်းနိုင်တော့မယ့် ဒေါမွန်အတွက် နစ်နာခဲ့ရပါတယ်။ Disgraceful decision not to awardagoal for Bellingham pic.twitter.com/rj43AjTAfp — Utd Reports 🔴 (@ManUtdReports_) April 6, 2021 “ကျနော်ဘောလုံးကို မျှမျှတတနဲ့ လုယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဘထင်ပါတယ်၊ နည်းနည်းတော့ ဒေါသအမျပ်ထွက်စရာဖြစ်ခဲ့ရချိန်ပါ၊ ကင်မရာတွေအများကြီးနဲ့ စောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီး ကျနော်ဂိုးသွင်းတာတောင် မစောင့်တော့ဘူး၊ သွင်းပြီးမှ သူတို့က ဆန်းစစ်ရမှာပါ၊ ဒါကဘောလုံး၊ ဒါကဘဝပါပဲ၊ သူတို့ ဒါကိုပြန်ပြီး စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်၊ ဂိုးသမားကိုကျနော်က ထိတာလား၊ သူကပဲ လာကန်ပြီး လဲကျသွားလားဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ပါ” လို့ ဘီလင်ဟမ်က ပွဲအပြီးမှာBT SPORT ကတဆင့် ပြောဆိုခဲ့ပြီး နစ်နာမှုအတွက် မကျေမနပ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ VAR နဲ့ပြန်လည်ကြည့်ရှူပြီး မဆုံးဖြတ်ခဲ့သလို ဘီလင်ဟမ်ဂိုးသွင်းချိန်ထိမစောင့်ဘဲ ကွင်းလယ်ဒိုင်က ဝီစီမှုတ်ခဲ့တာကြောင့် အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကေါ်မှာ ဝေဖန်မှုတွေလည်း ရှိခဲ့ပြီး အနှေးပြကွက်တွေအရ ဘီလင်ဟမ် နဲ့ အီဒါဆန်တို့ဟာ တဦးနဲ့တဦး ထိခိုက်ဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့တာထင်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲကတော့ ၂-၁ နဲ့ မန်စီးတီးအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး နောက်တကျော့အတွက် ဘာမှသေချာပေါက်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားပါ။